Myanmar Targets6% GDP Growth in 2020-21 | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar Targets6% GDP Growth in 2020-21
BusinessInvestment & FinanceLocal
Myanmar Targets6% GDP Growth in 2020-21
U Maung Maung Win, Deputy Minister of the Ministry of Planning, Finance, and Industry, forecasted that the country’s GDP growth in the 2020-21 Fiscal Year targeting to reach K125.803 trillion.
There are multi-sectoral collaborations going on to stabilize the price, strengthen local currency, and minimize inflation, he said during the Parliament session on July 13.
The government also forecasted that agriculture will show 2.6 percent development and 6.5 percent in industrial sectors.
For the 2019-21 Fiscal Year, the country targeted K119.023 trillion and7percent GDP growth. It has generated K74.503 trillion GDP in the first six months of this fiscal year.
However, the country also targeted 4.1 percent of economic growth by the end of the 2019-2020 fiscal year.
Written by Tayzar Bhone Myint/ Translated into English by Min Thu Aung
၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တစ်မျိုးသားလုံး၏စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး( GDP )ကို တိုးတက်မှုနှုန်း ၆ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း ကပြောသည်။
ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍတွင် စျေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး ပိုမိုတည်တံ့ခိုင်မာစေရန် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကုန်စည်များထုတ်လုပ်မှု၊ စားသုံးမှု၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု စသည့်နယ်ပယ်အသီးသီးမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့ကပြောကြားသည်။
၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တစ်မျိုးသားလုံး၏ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး( GDP )ကို နှစ်အလိုက် စျေးနှုန်းအရ ငွေကျပ် ၁၂၅ ဒသမ ၈၀၃ ထရီလီယံရရှိရန် ရည်မှန်းထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကဏ္ဍအလိုက် ရည်မှန်းရာတွင် လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ စက်မှုကဏ္ဍတွင် ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။
၂၀၁၉−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးကို နှစ်အလိုက်စျေးနှုန်းအရ ငွေကျပ် ၁၁၉ ဒသမ ဝ၂၃ ထရီလီယံ နှင့် ၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်ရည်မှန်းခဲ့ရာ ပထမခြောက်လပတ်တွင် ငွေကျပ် ၇၄ ဒသမ ၅၀၃ ထရီလီယံ ရရှိခဲ့သည်။ စီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်အပေါ် ၆၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
COVID ကြောင့်စီးပွားရေး ထိခိုက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု နှုန်း ၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
Previous articleApartment rental fees lower due to sluggish demands
Next articleMIC Approves $115 Mln Project in Tanintharyi Region